Home News Darawal Waday Gaari Meeyd Siday oo lagu dilay Muqdisho!!
Darawal Waday Gaari Meeyd Siday oo lagu dilay Muqdisho!!
Dilka Darawalka ayaa waxa uu ka dhacay Isgoyska EVECO ee Wadada Warshadaha gobolkaan Banaadir waxaan la sheegay in ninka uu waday Gaari sidey meyd.
Darawalka la dilay oo ahaa Wiil Dhalinyaro ah ayaa waxaa Wararku sheegayaan in uu Gaariga ku waday meydka Aabihiis oo la doonayay in maanta la’aaso halka dadka qaarkood ay sheegeen in uu ahaa Adeerkiis.
Darawalka ayaa waxaa dilkiisa ka dambeeyey mid ka mid ah Ciidamada dowladda ee ku sugan Isgoyska EVECO,kadib muran soo kala dhexgalay,waxaana uu ugu geeriyooday mid ka mid ah Isbitaalada Muqdisho oo dhaawac ahaan loo geeyey.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in askarigii ka dambeeyey dilkaas ay gacanta ku dhigeyn ciidamada,isaga oo doonayey in uu goobta ka baxsado.
Previous articleDowlada Canada oo Shaacisay Cadadka Lacagta ay siiso Soomaaliya!!
Next articleShacabka Gobolka Banaadir oo Cabasho weeyn ka muujinaayo Ciidamo u gaar ah Gobolka!!
Xubno sare oo ka tirsan golaha militariga Suudaan oo is casilay
Wives rejoice and traders despair as coronavirus halts khat supply to...